China Axial Flow Regulator စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ Convista
အမည်အရွယ်အစား: DN50 ～ 500 (NPS2 ～ 20)
အမည်ခံဖိအား: CLass150 ～ 900
ဒီဇိုင်းစံ： IEC 60534、 JB / T 7387
ဒီဇိုင်းအပူချိန်： -29 ℃ ～ + 150 ℃ -46 ℃ ～ + 150 ℃
ကားကိုယ်ထည်ပစ္စည်းများ - A105、 A350 LF2； A352 LCC
ထိန်းညှိခြင်းတိကျမှု: ±± ၁%% ။
Regulator Hysteresis ±± 1%%）
ယိုစိမ့်မှုအတန်းအစား： FCI-70-2、 IEC60534-4; ၆
အကွာအဝေးရှည်လျားသောပိုက်လိုင်းဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ရေနံသိုလှောင်ရုံ၊ ဖိအားကိုထိန်းညှိဘူတာရုံ; ထွက်ပေါက်ကိရိယာမှာဖိအားနှင့်စီးဆင်းမှုနှုန်း၏တိကျသောထိန်းချုပ်မှု
သက်ဆိုင်သောအလတ်စား： သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံစိမ်းနှင့်သန့်စင်သောရေနံ၊ အခြားဓာတ်မတည့်သောဓာတ်ငွေ့နှင့်အရည်ပေါက်ကွဲမှုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းလူတန်းစား： ExdIIBT4, IP65
l သတ္တုများကိုပုံသွန်း ပြုလုပ်၍ သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းဖြင့်အရည်အသွေးကောင်းသောသတ္တုများကိုသွန်းလောင်းသည်
ဌ monomer သတ္တုများပုံသွန်းအပေါ်သို့ 20 ကျော် radiographic စစ်ဆေးရေး
၁။ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစနစ်သည်မတူကွဲပြားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ပြည့်စုံသောဖိအားနှင့်ပြည့်စုံသောဖိအားပေးမှုအခြေအနေများအောက်တွင် ၁၀၀ ရာနှုန်းပြည့်အကွာအဝေး (TSO) ကိုနားလည်နိုင်သည်။ အကြိမ် ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်ဖိအားပေးမှုစမ်းသပ်မှုအောက်တွင်မူလတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစံသည်စံချိန်မှီနိုင်သည် FCI-70-2、 IEC60534-4 နှင့်အထက် VI ထက်သာလွန်သည်။ အဆ 500,000 ကျော်ဖိအားအရေးယူစမ်းသပ်မှုအောက်မှာ, စံတွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ် FCI-70-2、 IEC60534-4 နှင့်အထက် IV ထက်သာလွန်, တိုးချဲ့အသုံးပြုမှုပင်ဒီအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
လှိုင်းလေထန်ခြင်းနှင့်အခြားအကာအရံများကိုလျှော့ချရန်နှင့်တစ်ယူနစ်စီးဆင်းမှုperရိယာတစ်ခုစီအတွက်စီးဆင်းမှုစွမ်းရည် CV ကိုတိုးမြှင့်ရန် (၂) ရိုးရာကမ္ဘာအဆို့ရှင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၀% တိုးနိုင်သည်။ အကြီးဆုံးချိန်ညှိအချိုးသည် ၁၀၀း၁ ဖြစ်သည်
3. မြင့်မားသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံ။ အပေါ်က 20” အရွယ်ရှိအဆို့ရှင်အတွက်၎င်း၏အမြင့်သည်ညီမျှသောကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင်၏ထက် ၀ က်မျှသာရှိတာမို့အရွယ်အစားနဲ့အလေးချိန်တို့အတွက်အထူးလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝအကွာအဝေး 4. ဖိအားမျှမျှတတဖွဲ့စည်းပုံ။ သေးငယ်သော torque သည်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အသေးစားသွင်းအားစုသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား actuators လိုအပ်သည်။ အထူးကိစ္စများတွင်လေဖြတ်ချိန်နည်းခြင်းသည်ဖိအားပေးစက်၏ဖိအားကိုထိန်းချုပ်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
API 6D အထိ၊ အမဲဆီနှင့်ဖိအားလျှော့ချရေးလုပ်ဆောင်ချက်၊ မီးဘေးကင်းသည်
ရှေ့သို့ မြင့်မားသော tmperaure နှင့်မြင့်သောဖိအားဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆို့ရှင်
နောက်တစ်ခု: Axial ဖိအားကိုထိန်းညှိ Valve
5312 Wafer အသံတိတ်စစ်ဆေးရန်အဆို့ရှင်
3243 NRS ဒဏ်ခံထိုင်ခုံတံခါး Valve
5109 5709 Ball ကို Check Valve
ဘေးထွက် Entry လုပ်သံမဏိ Trunnion Mounted Ball ကို V ...
ရေနွေးငွေ့ - ရေစနစ်အဘို့အစင်ပြိုင်လျှော Valve